Okunethezeka kwe-AC Aprt eTamhini Devkund Kolad rafting
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Subhash
Ukuhlala okunethezeka efulethini eli-1 lokulala eli-1 elinefenisha ngokugcwele endaweni enhle yaseTamhini Ghat. Igumbi lokulala negumbi lokuhlala eline-AC, ikhishi elincane elifakwe Isiqandisi, i-microwave, isihlanzi samanzi se-RO, izitsha nezitsha. Indawo ekahle yezimpelasonto nomndeni nabangane.
Izinsiza ezijwayelekile njenge-Swimming pool, ihholo lomphakathi, izingane zokudlala epaki ezitholakalayo.
I-Kundalika Rafting, ezemidlalo zamanzi, inqaba ye-Raigad, i-Pali Ganpati, i-Dive Agar, amabhishi e-Kashid/Harihareshwar kanye ne-Imagica eduzane.
Le ndawo ibekwe endaweni efanele ezintabeni zaseSahyadri eTamhini ghat. Igcwele izitshalo ne-founa futhi idume kakhulu ngezinhlobo zamaNdiya, izinyoni nezinsiza zemvelo. Umuntu angajabulela ukuhamba ngezinyawo, ukuzizwisa ngentambo e-Raigad fort kanye nomdlalo wokuzilibazisa ofana ne-rafting emfuleni e-Kundalika eqhele ngamakhilomitha ayi-7. Izindawo zezivakashi ezivelele kanye nezindawo zokuvakasha ziphakathi kwebanga elingamakhilomitha angama-25 kuye kwangama-60 ukusuka kule ndawo. Ungahlala lapha futhi wenze uhambo lwezinsuku ezingu-2-3 e-Raigad, i-Pali, ibhishi le-Kashid, i-Harihareshwar, i-Shrivardhan, i-Dapoli, i-Imagica Theme Park, ithempeli le-Salav Birla nokunye okuningi. Sinikeza lonke usizo lokwenza uhlelo lokuvakasha futhi singahlela nokuvakasha kwephakheji ubusuku obu-2 nezinsuku ezi-3.
Ungakwazi ukujabulela izimpophoma endleleni usuka ePune naseMumbai uya eTamhini futhi ubambe isivivinyo se-Pakoda Bhaji, Ummbila netiye elishisayo ezindaweni ezihlukahlukene usendleleni.
Sinendawo yokudlela enhle kakhulu yase-Orchard ehlinzeka ngokudla kwase-Indian nase-Continental eduze kwesango elikhulu futhi ehlinzeka ngokudiliva ekhaya ukuze ihambisane nezidingo zakho. Ikhishi lihlome kahle ngazo zonke izitsha ze-microwave, isitofu segesi, isiqandisi, izitsha nezinto zokusika.
umbhede oyidabulu engu- 1, 1 umbhede wosofa, omatilasi abangu- 3
4.70(27 okushiwo abanye)
Ifulethi lizungezwe izitshalo nezilwane, kukhona ama-bungalows endaweni eseduze nebanga elanele futhi ungaba nobumfihlo obuphelele.
I am in an engineering profession and has passion for travel and tourism, visited almost entire India for sight seeing by own self driven car with self designed travel plans. Have…
Ngihlala ngitholakala ukuze ngisize futhi ngiqondise izivakashi.